I-Afrika Day – The Ulwazi Programme
Njengabantu basezwenikazi i-Afrika sisuka kude futhi kuningi esesidlule kukho ngokuhlukana ngokwamazwe kwethu. Noma sihlukene ngokwamazwe kepha izinselelo esibhekene nazo ziyafana futhi zisikhungethe ngokufana. Ingakho ke nje kungamangazi ukuthi kunezinto esezigubha ngokufana kulolonke izwekazi lase Afrika. Into edume izwekazi lonke lethu ukugujwa kosuku olubizwa ngokuthi “i-Afrika Day” okungusuku lwezwekazi lonke lethu.
Lolusuku kuqala belwaziwa ngokuthi i- African Freedom Day kanye ne- African Liberation Day okusho ukuthi belwaziwa njengosuku lokubungazwa kokukhululeka kwezwekazi lase Afrika kwabaMhlophe ababelithathe ngendlunzula. Kanti ke lolu usuku olubungazwa unyaka nonyaka, lubungaza ukwakhiwa kwenhlangano yokuhlangana kwezwekazi lase Afrika i-Organization of African Unity eyasungulwa ngomhlaka 25 Meyi 1963. Lolu suku lubungazwe amazwe amaningi ase Afrika ngokuhlukana kwawo kanye nasemhlabeni jikelele. Kanti ke lenhlangano i-Organization of African Unity yabe isishintshelwa ekubeni ibe i-African Union ngomhlaka 2 Julayi 2002 eThekwini , eNingizimu Africa kodwa ke lokho akushintshanga lutho ngosuku njengoba namanje lusagujwa ngalo usuku lwango mhlaka 25 Mayi unyaka nonyaka.
Ukuhlangana kokuqala kwamazwe akhululekile ezwekazi lase Afrika yabanjelwa ezweni laseGhana edolobheni elibizwa ngokuthi i-Accra ngomlaka15 Ephreli 1958. Yahlanganiswa uNdunankulu waseGhana uDokotela Kwame Nkrumah, ehlanganyele nezithunywa zakwamanye amazwe okubalwa kuwo i-Egypt eyayiyingxenye ye-United Arab Republic ngaleso sikhathi, i-Ethopia, Liberia, Libya, Morocco, Sudan, Tunisia, Cameroon kanye nalo izwe elaliyisingethe iGhana. Kanti ke lengqungquthela yatshengisa kakhulu inqubekela phambili yezwekazi lase Afrika ekulwisaneni nokucindezeleka kanye nokuxhashazwa amanye amazwekazi “continents”. Noma inhlangano ebizwa nge Pan-African Congress yayikade isebenzela ezifisweni ezifanayo nalezi zokuhlanganisa izwekazi lase Afrika kusuka ngonyaka ka-1900 kodwa kwakungokokuqala kuhlala umhlangano walamazwe.
Categories History, News Tags Afrika Day